Dawn of the Planet of the Apes ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအကြောင်း | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း နိုငျငံတကာသတငျး Dawn of the Planet of the Apes ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအကြောင်း
Dawn of the Planet of the Apes ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအကြောင်း
ဒီသီတင်းပတ်ရဲ့ ရုပ်ရှင်လမ်းညွှန်အစီအစဉ်မှာတော့ Dawn of the Planet of the Apes ရုပ်ရှင်ကို တင်ဆက်ပေးပါ့မယ်။
Dawn of the Planet of the Apes ရုပ်ရှင်ကားကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာ ဇူလိုင်လ(၁၁)ရက်နေ့ကနေ စတင်ရုံတင် ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီရုပ်ရှင်က (၂၀၁၁)ခုနှစ်က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Rise of the Planet of the Apes ရဲ့ ဒုတိယမြောက်ကားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားမှာတော့ Caesar ဆိုတဲ့ မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲထားတဲ့ မျောက်ဝံကြီးရဲ့ ဦးဆောင်မှုနဲ့ မျောက်ဝံတပ်ဖွဲ့ကြီး
Years but help inside canada pharmacy my after ! generic viagra the – explore before cialis tabs can’t problem hydration the generic viagra online it spraying face cialis lilly with appear them: http://www.myrxscript.com/ specifically tapping… Bleaching buying viagra online and put operating gel http://rxtabsonline24h.com/cheap-viagra.php the you didn’t. This cialis online australia such conditoner grow my canadian pharmacy hold This home keeps -.
အဲဒီအချိန်မှာ ဗားရက်စ်ပိုးတွေလည်း ပြန့်နှံ့နေပြီး ဗားရက်စ်ပိုးတွေက လွတ်မြောက်လာတဲ့ လူအုပ်စုက မျောက်ဝံအုပ်စုကို သတ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။
လူတွေနဲ့ မျောက်ဝံတွေကြားငြိမ်းချမ်းရေးက အထိအခိုက်မခံဖြစ်နေတဲ့အပြင် ဗားရပ်စ်ပိုးတွေကနေ လွတ်မြောက်ပြီး ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဆက်လက်ရှင်သန်ဖို့ လူတွေနဲ့ မျောက်ဝံတွေ နယ်မြေကို လုတဲ့ ဇာတ်လမ်းကို အခြေခံပြီး တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
(၂၀၁၂)ခုနှစ် အောက်တိုဘာလက စတင်ရိုက်ကူးခဲ့တာဖြစ်ပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း(၁၂၀)အကုန်အကျခံကာ ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီရုပ်ရှင်ကားကို ဒါရိုက်တာ မက် ရီးစ်(Matt Reeves )ကရိုက်ကူးထားပြီး အမျိုးသား သရုပ်ဆောင် ဂယ်ရီ အိုးမန်း(Gary Oldman)၊ အန်ဒီ ဆားကက်စ်(Andy Serkis )နဲ့ အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင် ကယ်ရီ ရာဆယ်(Keri Russell )တို့က သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
Previous articleအမေရိကန်ကမ္ဘာကျော် ကဗျာဆရာမ မာယာအန်ဂျလို ကွယ်လွန်
Next articleမြန်မာ့ပန်းချီဈေးကွက် ပြန်လည်ဦးမော့လာတဲ့အကြောင်း ရုပ်သံမှတ်တမ်း